कर्णालीमैं भेटिए डा. गोविन्द केसी, मुगुमा ८४ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण – HostKhabar ::
कर्णालीमैं भेटिए डा. गोविन्द केसी, मुगुमा ८४ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण
मुगु : दिनदुखीलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिंदै आएका बरिष्ठ हाडजोर्नी बिशेषज्ञ डा. गोबिन्द के.सी. कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा स्वास्थ्य सेवा दिनमा व्यस्त छन् ।
कालिकोट हुदै मुगु र डोल्पा समेत पुगेका डा. के.सी शनिबार मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकामा भेटिएका हुन् । उनले सो नगरपालिकामा ८४ जनाको स्वास्थ्य परिक्षण गरे । मुगुको जिल्ला अस्पतालमा उनले चिकित्सकहरुसंगको सहयोगमा घट्टलेख गाउँकी १० वर्षीया रेश्मा भामको निःशुल्क देब्रे हातको अप्रेसन गरे ।
नगरपालिका–७ बालै गाउँका १७ वर्षीय गगन भामको देब्रे खुट्टाको पनि डाक्टर केसीले अप्रेसन गरेका छन् । एक वर्षअघि लडेर उनको खट्टाको पिडौला नजिकको हड्डी भाँचिदा घाउ भएको भित्री भागमा पिप जमेर पाकेको यताउती हिँडडुल गर्न गाह्रो अवस्था थियो । डाक्टर केसी आएको थाहा पाएपछि गाउँका धेरै मानिसहरु खुशी हुँदै स्वास्थ्य सेवा लिन पुगेका छन् ।
डाक्टर केसी अस्पतालमा पुगेर बिरामीको जाँच र शल्यक्रिया सेवा दिन थालेपछि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मी उत्साहित भएका छन् भने उनीहरुलाई हड्डीको रोग विषयमा प्रशिक्षण दिने जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख निर्मल नगरकोटीले बताए ।